Amandla kagesi ayinsika esemqoka - Bayede News
Amandla kagesi ayinsika esemqoka
Ukushaywa kwemithetho: Ngabe abantu baphakelwa osekuphekiwe noma baba yingxenye yokuqala ukupheka?
Abakwa-Eskom bathi basebenzisa izindlela eziningi zokungenelela ukuzama ukuthuthukisa ukulethwa kwezinsizakalo zabo nokunciphisa ukunqanyulwa kukagesi. Isikhulu sale nkampani ephehla ugesi u-André de Ruyter sithi okunye okubakhathazayo ukungakhokhelwa kukagesi ngomasipala. Uthi okonakele kakhulu ezweni nguMasipala waseMaluti-A-Phofung eFree State, okweleta u-Eskom imali engaphezu kwezigidigidi ezi-R5.
UDe Ruyter uthi bazama ukuguqula indlela imali eqoqwa ngayo komasipala.
”Sihlakulele lo mbono osebenzisanayo nomasipala esizama ukuwusebenzisa eMaluti-A-Phofung onesikweletu sethu esikhulu somasipala esisodwa. Basikweleta imali elinganiselwa ezigidigidini ezi-R5,9 futhi sizama ukufinyelela esinqumweni lapho ngemvume yoMgcinimafa Kazwelonke ezosivumela ukuba sisebenze njengommeleli kamasipala, ngakho-ke kuyindlela enezici ezahlukahlukene kulo lonke ibhizinisi. ”
NgoMsombuluko kuzokhumbuleka ukuthi u-Eskom wabuyisa ukucinywa kukagesi kusuka ngehora lesi-5 ntambama kuya kwele-10 kusihlwa, futhi kuze kube manje akukacaci ukuthi inkampani ephehla ugesi izoqhubeka yini nokunikeza abantu baseNingizimu Afrika ukunqanyulwa kukagesi okuhleliwe esikhathini esisele kulobusika. U-Eskom uvame ukusebenzisa uhlelo lokunqanyulwa kukagesi eminyakeni yamuva nje phakathi nomlando wokuntuleka kokugcinwa kwezikhungo zokuphehla ugesi ezindala nezinsolo zenkohlakalo esabalele. Abanye ochwepheshe bathi isigaba ngasinye sokucinywa kukagesi kukhinyabeza umnotho ngemali ebalelwa ezigidini ezingama-R700 ngosuku.
Ingqungquthela yokudingida umkhakha wamandla
Ingqungquthela ye-Enlit Africa, phambilini ebibizwa nge-Africa Utility Week, iqala eCape Town International Convention Centre kuleli sonto. Ababambiqhaza basekhaya nabamazwe omhlaba emkhakheni wezamandla kulindeleke ukuthi baxoxe ngokuziphendukela kwemvelo emkhakheni wezamandla namandla emhlabeni jikelele. Esinye isazi samandla eNingizimu Afrika, uTed Blom wathi unethemba lokuthi lo mkhuba wokucinywa kukagesi nawo uzobonakala kakhulu ezingxoxweni.
Sigxekwa nxazonke isinqumo sokudayiswa kweSAA
“Ngisho nokuthi sesiphelelwe yisikhathi futhi u-Eskom uzoqala ukuqeda izitshalo zamalahle eminyakeni emihlanu ezayo, ngicabanga ukuthi okuwukuphela kwekhambi ukuvula igridi futhi sinikeze wonke umuntu amandla amaningi ngangokunokwenzeka, kwimikhawulo yekhwalithi. Ngaphandle kwalokho sekuyisikhathi sokuyeka uhlelo lokulawula uvulele igridi wonke umuntu, yiso kuphela isisombululo. “
Anathi Mtaka Jun 11, 2021